DIY: အီဗာရော်ဘာပန်းပွင့်၊ | လက်မှုပညာ
သင်လုပ်ချင်ပါတယ် အီဗာရော်ဘာပန်းများ? ဒီနေ့သင်တို့ကိုဤ eva သို့မဟုတ်အမြှုပ်ရော်ဘာ daisies ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ပန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်မှုပစ္စည်းများကိုအလှဆင်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနှင့်ကဲ့သို့သောမည်သည့်အလုပ်အတွက်မဆိုပျော်ရွှင်မှုနှင့်အရောင်အရောင်များဖြစ်သည် အဖြည့် များစွာသောအခြားစီမံကိန်းများ၏။
ငါအသုံးပြုရတာအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့အီဗာရော်ဘာပန်းများအကြောင်းဒီအကြံဥာဏ်ကိုသင့်အားတင်ပြလိုပါတယ် keychain, headband အဆင်တန်ဆာ, ဆွဲပြား သို့မဟုတ်သင်စဉ်းစားနေသောအခြားအလုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ဆောင်တစ်ခုအားနောက်ဆုံးထိပေးပါ။
1 Eva ရော်ဘာပန်းပွင့်စေရန်ပစ္စည်းများ
Eyeshadow သို့မဟုတ်မျက်နှာနှင့်ဝါဂွမ်း swab
မင်းရဲ့အကူအညီနဲ့ အားလုံး strips တွေထွက်ခုတ်ဖြတ် အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းအတာတွေနဲ့။ သင်တတ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ အရောင်များကိုရွေးချယ်ပါ ဒီအလုပ်အတွက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်များကိုသင်လိုချင်သည့်အတိုင်းပေါင်းစပ်ပါ။
အမြင့်ဆုံးမှအနိမ့်သို့ Paste ငါတို့ကောင်းစွာဂရုစိုက်နိုင်အောင်အလွန်ဂရုတစိုက်ဖြတ်သော strips တွေ။
ထိုနည်းတူပြုလော့ ကျန်ရှိသော strips တွေနှင့်အတူ။
အစင်းများကိုအတွင်း၌ကပ်ထားပါ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့အသေးငယ်ဆုံးကနေအကြီးမားဆုံးအထိဖြစ်သွားပြီးဒီပုံဟာပုံထဲမှာရှိလိမ့်မယ်။ အဆုံးအားလုံးကိုက်ညီပြီးအလွန်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်သတိထားပါ။
အပိုင်းပိုင်းအားလုံးနှင့်အတူတူလုပ်ပါ၊ နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့ရှိရမည်6တန်းတူအဆောက်အ ဦ များ။
တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်မှကပ်ထားပါ။ အားလုံးနှင့်အတူ။ မင်းနောက်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်တော့ ပန်းကိုပိတ်နိုင်မည့်ပထမတစ်ခုနှင့်ကပ်ထားပါ။
စက်ဝိုင်းနှစ်ခုနှင့်အရွက်နှစ်ခုဖြတ်ယူပါ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Eva ရော်ဘာပန်းပွင့်ဖြည့်စွက်ဖို့ကူညီလိမ့်မည်။
အလယ်ဗဟိုမှာစက်ဝိုင်းကပ်ပါ ပန်းပွင့်နှင့် အောက်ခြေကနေအရွက် သူတို့ကပုံထဲမှာလိုပဲပေါ့။
ပန်း၏မျက်နှာကိုအလှဆင်။ ငါမျက်လုံးနှစ်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ မျက်တောင်၊ မျက်နှာမပျက်နှင့်အပြုံးနှစ်ခုဖြင့်ပြုမိခဲ့သော်လည်းသင်နှစ်သက်သောဒီဇိုင်းကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။
ငါတို့ကာတွန်းရော်ဘာအီဗာမာဂရီးကိုလက်စသတ်လိုက်ပြီ။ ဘယ်လိုလဲ? သင်ဘာအတွက်သုံးမလဲ ငါသူတို့ကိုချစ်တယ် keychains, ကျောပိုးအိတ် သို့မဟုတ်ပင်အချို့ကိုအလှဆင်ဖို့ သေတ္တာသို့မဟုတ်ကဒ်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင် အီဗာရော်ဘာပန်းများဤနှင်းဆီပန်းများကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သူတို့သည်လုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးလှပပါသည်။
နောက်သင်ခန်းစာတွင်တွေ့ပါ။ သင်သည်ဤလက်မှုပညာများကိုလုပ်ဆောင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်၏လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်ကိုဓာတ်ပုံပို့ရန်မမေ့ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာနှင့်ပစ္စည်းများ » EVA ရော်ဘာနှင့်အတူလက်မှုပညာ » အီဗာရော်ဘာပန်းများ
အဆိုပါပွင့်ချပ် well fit fit ပါဘူး